कोभिडको समयमा 'मायाको अँगालो'
बैशाख १२, २०७८ ०९:४६ मा प्रकाशित
- हिरा सुवेदी/रामकुमारी सापकोटा
चितवन जिल्ला भरतपुरमाहनगरपालिका, गणेशथान टोल, वडा नं. ११ मा बस्ने २६ वर्षीय अनिता गुरुङ्गले भारतबाट कक्षा ८ पास गरेकी थिइन् भने २९ वर्षीय उनका श्रीमान् सुरज गुरुङ्गले १२ कक्षासम्मको पढाई पुरा गरेका थिए । सुरजले घर बनाउने काम गरी महिनावारी १० हजारदेखि २० हजार रूपैया कमाई गर्थे भने अनिताले घर गृहस्थी सम्हाल्दैै आईरहेकी थिइन् । डेरामा बस्दै आइरहेका उनीहरूको दैनिक घर व्यबहार चलाउन आफ्नो महिनावारी कमाईले मात्र प्रर्याप्त हुदैनथ्यो ।
२६ वर्षीय अनिता पहिलो पटक गर्भवती हुँदा उनी र उनको श्रीमान् अत्यन्तै खुशी थिए । समय समयमा गर्भवती जाँच गराउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि कोभिड महामारीका कारण देखाई घरधनीले उनीहरूलाई घरबाट बाहिर जान दिएका थिएनन् । तत् पश्चात गर्भवती भएको पाँचौ महिनामा मात्र उनी गर्भ जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्था जान पाइन् । “सबै ठिकै छ र तपाईको जुम्ल्याह बच्चा छन्” भनेर स्वास्थकर्मीले जानकारी दिए पनि शिशुहरू स्वस्थ्य जन्मनेछन् भन्नेमा अनिता र उनका श्रीमान् ढुक्क थिए । छैठौं महिनामा नियमित जाँच गराउन जाँदा आमा र शिशुहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
एक्कासी छैठौं महिनाको अन्त्यतिर पुग्दा अनिताको पेट बेस्कन दुख्न थाल्यो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पटक पटक जाँच गराउन गाह्रो थियो । उनले आफ्नो पेट बेस्कन दुखेको कुरा उनकी सासुआमासँग गरिन् र आमाको सल्लाहअनुसार घरेलु उपचार सुरु भयो । ज्वानो र तातोपानी खाएर केही दिन त सन्चो भयो तर समस्या भने समाधान भएन । दुखाई बढ्न थालेपछि घरपरिवारको सल्लाहअनुसार उनले स्वास्थ्य संस्थामा गई जाँच गराईन् । भिडियो एक्स-रेको रिपोर्ट हेरेर स्वास्थ्यकर्मीले कुनै आत्तिनु पर्ने समस्या नभएको र दुवै बच्चाहरूको अवस्था पनि सामान्यभएको जानकारी गराएपछि दुवै दम्पति चिन्तामुक्त भए ।
गर्भावस्थाको सातौं महिना पुरा हुनासाथ अनितालाई व्यथा लाग्यो । यताउति नगरी उनी भरतपुर सरकारी अस्पतालमा गईन् र कार्तिक ६ गते २०७७ का दिन जुम्ल्याहा शिशुुहरू जन्माइन् । “सरकारी अस्पताल हुनाले भरतपुर अस्पतालमा सुविधाहरू धेरै पाइने, खर्च पनि कम लाग्ने अनि घरबाट पनि नजिकै पर्छ यो अस्पताल’, अनिताले भनिन्, ‘ओहोरदोहोर गर्न पनि सजिलो त्यै भर हामीले सुरुदेखि नै यहीँ सुत्केरी गराउने कुरा सोचेका थियौं ।”
सात महिनामै जन्मेका नवजात शिशुुहरूको तौल ९५० ग्राम र १ हजार १५० ग्राम रहेछ । शिशुहरू अति साना देख्दा सुरुमा उनको मन खिन्न भयो । तौल कम भएकै कारण शिशुहरूमा सास फेर्ने समस्या र संक्रमणको पनि समस्या देखिन थाल्यो ।“दुवै शिशुहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेकोले शिशुहरूलाई एनआइसीयू वार्डमा राखेर उपचार गराउनुपर्छ” भनेर स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिएपछि एनआईसीयू वार्डमा भर्ना गरी औषधी र खुट्टाबाट स्लाइन पानी दिई उपचार सुरु गरियो । अनिता भन्छिन् “शिशुहरूको तौल कम भएको बारे हामीलाई कुनै जानकारी थिएन । जब डाक्टरले हाम्रा दुवै शिशुहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै सम्झाउन थाले, हाम्राबच्चाहरू नबाँच्ने पो हुन् कि भन्ने डरले हामी साह्रै आत्तियौँ ।”
सुरजसँग कोरोना जाँच गर्ने पैसा थिएन । उनले जसोतसो १५ हजार ऋण गरे । अनि २ हजार रूपैयाँमा अनिताको कोरोनाको जाँच गराए । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पनि अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गर्न सुरजले धेरै अनुरोध गर्नुपर्‍यो ।
एनआईसीयू वार्डमा राखिसकेपछि पक्कै पनि शिशुुहरूले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् र पुनः शिशुहरू स्वस्थ अवस्थामा फर्किन्छन् भन्ने आशा उनलाई थियो । एनआईसीयू वार्डमा राखिएका नवजात शिशुहरूलाई संक्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै पनि सुत्केरी आमाहरूलाई एनआईसीयू वार्डमा जान दिइदैनथ्यो । तर हरेकदिन सुत्केरी आमाहरूले आफ्नो दुध कपमा निचोरर आफ्नो नवजात शिशुहरूलाई खुवाउन स्वास्थ्यकर्मीको सहायतामा पठाउन सक्थे । उनले पनि हरेक दिन आफ्नो दुध निचोरेर कपमा आफ्ना जुम्ल्याहा नवजात शिशुहरूलाई खुवाउन एनआईसीयू वार्डमा खटिएका स्वास्थकर्मीहरूलाई दिने गर्थिन् र सोही समयमा आफ्ना शिशुहरूको स्वास्थ अवस्थाबारे जानकारी लिन्थिन् । आफ्ना जुम्ल्याहा शिशुहरूको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको खबर सुन्दा उनलाई शिशुहरू ठिक हुन्छन् भन्ने पुर्ण विश्वास जाग्यो ।
शिशुहरूको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गर्दा यता अनितालाई सुत्केरी भएको पाँच दिनदेखि चिसोले छोयो र सास फेर्न समस्या भयो । उनलाई निमोनियाले च्यापेको रहेछ । स्वास्थकर्मीले सुरजलाई “तपाईकी श्रीमतीको स्वास्थ्य धेरै नाजुक भएको हुँदा बचाउन गाह्रो छ” भनेर पनि भनेका थिए । स्वास्थकर्मीले इमरजेन्सीमा लानु भनेर सल्लाह दिए पनि उनलाई इमरजेन्सी वार्डमा भर्ना गरी उपचार गर्न सहज भएन । कोरोनाको जाँच गरी रिपोर्ट नआएसम्म इमरजेन्सीमा भर्ना गर्न मिल्दैन भने । सुरजसँग कोरोना जाँच गर्ने पैसा थिएन । उनले जसोतसो १५ हजार ऋण गरे । अनि २ हजार रूपैयाँमा अनिताको कोरोनाको जाँच गराए । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पनि अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गर्न सुरजले धेरै अनुरोध गर्नुपर्‍यो । रातिको ३ बजे अनितालाई आईसीयू वार्डमा भर्ना गरियो र सुरजलाई अस्पतालको नियमानुसार “श्रीमतीलाई केही भएमा अस्पताल जिम्मेवार हुने छैन” भनी हस्ताक्षर कागज गराईयो । अनिताको दश दिनसम्म आईसीयूमा उपचार गरियो । उपचारका लागि लागेकोे औषधी खर्चलगायतका अन्य सम्पूर्ण खर्चको शुल्क तिर्न सुरजसँग ऋण लिनुबाहेक अन्य केही विकल्प थिएन । एनआईसीयूमा नवजात शिशुहरू अनि आईसीयूमा श्रीमती राखेर स्याहार गर्नुपर्दा सुरजलाई कति गाह्रो भयो होला भन्ने अनुमान हामी गर्न पनि सक्दैनौँ । अनिता आईसीयूमा हुँदा सुरजले ल्याक्टोजिन दूध किनेर आफ्ना शिशुहरूलाई खुवाउन एनआईसीयू वार्ड लगेर दिने गर्थे ।
१६औँँ दिनसम्म एनआईसीयू वार्डमा राखेर उपचार्थ जुम्ल्याहा नवजात शिशुहरूको स्वास्थमा केही सुधार भएपछि उनीहरूलाई कंगारु मदर केयर वार्डमा लगियो । सो वार्डमा लैजाँदा आमा र शिशुहरूलाई हुने फाइदाबारे दुवै दम्पति अज्ञात थिए र सो वार्डमा लैजानाले के कसो होला भन्ने उत्सुकता उनीहरूमा थियो । कंगारु वार्डमा लगिसकेपछि त्यहाँ सेवा दिइरहेका स्वास्थ प्रदायकहरूले मायाको अँगालोमा राख्नाले तौल बढ्न मद्दत पुग्छ, स्वास्थमा छिटो सुधार आउँछ, चिसो लाग्दैन साथै बच्चाको नियमित जाँच गर्दा केही समस्या देखा परेमा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने बारे बताएपछि उनीहरू खुशी त हुने नै भए शिशुहरूलाई मायाको अँगालोमा राख्न प्रेरित पनि भए ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले मायाको अंगालोमा राख्ने सहि तरिका सिकाउनु भयो साथै आमाले मात्र होइन परिवारका अन्य सदस्यले पनि पालैपालो राख्न सकिन्छ भन्नुभयो । “सुरुमा त शिशुहरू धेरै साना भएकाले राम्ररी समात्न आउँदैनथ्यो र मायाको अँगालामा राख्न पनि डर लागेको थियो तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले सिकाएअनुसार राख्न थालेपछि सहज हुन थाल्यो” अनिताले बताइन् ।
त्यतिखेर उनलाई मायाको अँगालोमा राख्दा आफ्नो सानो नवजात शिशुहरूलाई अलि गाह्रो भयो कि जस्तो लाग्थ्यो तर यसरी राख्नाले उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार अलि छिटो आउन मद्दत पुग्छ भन्ने मनमा लिदै उनले सल्लाहबमोजिम गरिरहिन् ।
सुरजले आफ्ना शिशुहरूलाई मायाको अँगालोमा राख्न अलिकति पनि अफ्ठ्यारो वा असजिलो मानेनन् । बरु यसरी राख्नाले आफ्नो साना शिशुहरू छिटै स्वस्थ हुन्छन् भन्ने सल्लाह पाएकाले सुरज थप उत्साहित भएका थिए ।
१२ कक्षासम्मको अध्ययन पुरा गरेका सुरजलाई स्वास्थ्यकर्मीबाट ज्वरो कसरी नाप्ने, अक्सिजन कसरी नाप्ने भन्ने कुरा सिक्न समय लागेन । उनले स्वयम आफ्नो शिशुहरूको ज्वरो र अक्सिजन मापन गरी रेकर्ड गर्ने गर्थे । दुवै नवजात शिशुहरू आमाको दूध चुस्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले उनले दूध कपमा निचोरी चम्चाले खुवाउने गर्थिन् ।
नवजात शिशुहरूको तौल र स्वास्थमा सुधार हुँदै गएको केही हप्तापछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनितालाई आफ्नो दूध चुसाउन कोसिस गर्नु भन्ने सल्लाह दिन थाल्नुभयो । यसका साथै दूध कसरी खुवाउने भनेर प्रक्रिया पनि सिकाईयो फलस्वरूप उनले दूध खुवाउन कोसिस गर्न थालिन् र केही दिनपछि नै शिशुहरूले सहज तरिकाले दूध चुस्न थाले ।
यसरी छातीमा टाँसेर राख्दा नवजात शिशुको तौलमा वृद्धि हुनुका साथै स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुँदै गएको दुवै आमाबाबुले अनुभव गरेका थिए । कंगारु वार्डमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले समय समयमा आएर शिशुहरूका समस्या बुझ्ने, भिटामिन खुवाउने लगायतका कुराहरूमा परामर्श दिने, नियमित जाँच तथा उपचारपश्चात शिशुहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आउँदै गरेको र आत्तिनुपर्ने केही कुरा नभएको भनि स्वाथ्यकर्मीले भन्दा औधी खुशी लाग्ने गरेको कुरा पनि अनिताले उत्सुकताका साथ सुनाइन् ।
जुम्ल्याहा नवजात शिशु भएकाले उनलाई यस वार्डमा दिनको दुईवटा अण्डा खान दिइन्थ्यो र बिहान बेलुका खानाका लागि पनि सोधिन्थ्यो । सुरुसुरुमा अस्पतालबाट दिएको खाना खुवाए पनि निमोनिया भएपछि सुरजले घरबाट नै खाना बनाएर खुवाउन थालेका थिए ।
यस वार्डमा नवजातशिशुहरू राख्न ४ वटा बेडहरू, २ वटा मायाको अँगालोमा राख्ने कुर्सीहरू र कम तौलको शिशुहरूलाई चिसो नहोस् भन्नाका लागि तापक्रम सन्तुलन गर्न एयर कण्डिसनरको सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो ।
साना नवजात शिशुहरूलाई कंगारु वार्डमा दिइएको स्वास्थ सेवाहरू धेरै लाभदायी भएको उनीहरूले बताए । यो स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन र शिशुहरूलाई संक्रमण तथा चिसो हुनबाट जोगाउन यी दम्पतिले बाहिरीे पाहुनाहरूलाई कम आउन दिने गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
अनिताले अस्पतालबाट घर आएपछि आफ्ना साना शिशुहरूलाई कंगारु वार्डमा राख्दा गरिएको स्याहार तथा सिकाईअनुसार आफ्ना दुवै शिशुहरूलाई मायाको अँगालोमा राख्ने गरेको साथै श्रीमान् सुरजले पनि आफ्नो फुर्सदको समयमा मायाको अँगालोमा राखी स्याहारसुसार गर्न मद्दत गरिरहेको बताइन् ।
सरकारी अस्पताल भरतपुरबाट आफ्ना कम तौलका शिशुहरूलाई जन्मेको दुई महिनासम्म आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू लिई दुई महिनापछि उनका साना जुम्ल्याहाहरूको तौल १ हजार १५० बाट बढेर २ हजार ३९० ग्राम र अर्कोको ९५० बाट बढेर १ हजार ७८० ग्राम पुग्यो र स्वास्थमा पनि कुनै समस्या नदेखिएकाले उनलाई घर जान डाक्टरबाट अनुमति दिईयो ।
अस्पतालको कंगारु वार्डबाट पाएको सिकाइ र सेवापश्चात आफ्ना दुई शिशुहरू स्वस्थ भएको देख्दा दुवै दम्पति हर्षविभोर छन् ।
उनले दुवै शिशुहरूलाई दिनदिनै तेल लगाई मसाज गरी राम्ररी सरसफाई गर्नुको साथै समय समयमा मायाको अँगालोमा राख्ने तथा प्रत्येक २ घण्टामा स्तनपान गर्ने गरेको बताईन् । साढे दुई महिना पुगेपछि दुवै शिशुहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा गई डि.पि.टि.खोप लगाउने समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले तौल पनि लिएका थिए ।
शिशुहरूको तौल पहिलेको भन्दा बढेर एउटा २ र अर्को ३ किलोग्राम पुगेको थियो । मायाको अँगालोमा राख्न अनिता प्रोत्साहित मात्र भइनन्, यसबाट आफूले प्राप्त गरेका फाइदाहरू बारे थप जानकारी परिवारका अन्य सदस्यहरू र साथीहरूलाई पनि उत्साहित हुँदै सुनाइन् । कंगारु वार्डका इन्चार्ज रामकुमारी सापकोटाले बताएअनुसार कोभिड १९ को महामारीमा पनि यस वार्डमा दिइने सेवामा केही असर परेको थिएन । बरु थप कुराहरूमा सतर्कता अपनाइएको थियो । जस्तै आमाबाबु तथा यस वार्डमा सेवा दिन आउने हरेक स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनिवार्य मास्क लगाउने र सबै जनाले यस वार्डमा आउनु अघि साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने ।
पहिला साना शिशुहरूलाई नापेर दूध खुवाउन २४ घण्टाको लागि एउटा सिरिन्ज र निसंक्रमणीकरण गरेको कचौरा दिइन्थ्यो भने अहिले कोभिडको समयमा अझ सुरक्षित रहनको लागि हरेक २/२ धण्टामा दूध नापेर खुवाउन एउटा सिरिन्ज र निसंक्रमणीकरण गरेको कचौरा दिने गरिएको छ ।
यस वार्डमा कोभिडको समयमा डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूले दुरी कायम गरी सुझाव तथा परामर्श दिँदै आएको बारेमा पनि रामकुमारी सापकोटाले बताइन् । सकेसम्म कोभिडबाट सुरक्षित रहनका लागि बिरामीका पाहुनाहरूलाई पनि यस वार्डमा आउन नदिन अनुरोध गर्दै आएको उनले बताइन् ।
स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएकै कारण हालसम्म कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण नभएको सापकोटाले दाबी गरिन् ।
(सुवेदी नि. मेट्रोन तथा सापकोटा कंगारु युनिट इन्चार्जका रूपमा भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ)